Ihe anọ site na ihe mgbochi banyere SEO Ndị niile na-emekọrịta ihe aghaghị ịma
Ndị mmadụ na-achọ inweta ego ọzọ ga-enweta ego ekwesịghị ileba anya karịa na ịntanetị bụ ebe kachasị atụkwasị obi iji nweta ezigbo ego. Ọ na-emetụta ụdị nile dị iche iche na azụmahịa. Mkpa ọ dị inwe ọnụnọ dijitalụ nọgidere na-egosipụta onwe ya kwa ụbọchị.
O nwere ike iyi ihe siri ike nghọta, ma ọ bụ ebe SEO na-abata. Ọtụtụ ndị nwere ike iche na ha maara banyere ya, ma e nwere ọtụtụ ihe ndị dị mkpa na ndị mmadụ na-eleghara anya - hosting servidor dedicado. N'akwụkwọ a, Oliver King, Semalt Onye Ahịa Success Manager, na-atụle okwu dị mfe asụsụ anọ nke SEO, bụ nke doro anya na ọ na - emetụta azụmahịa ọbụla.
Ntọala nke saịtị
N'ezie, ọ bụghị ọtụtụ ndị maara ihe SEO bụ ma ọ bụ ihe ọ na-eme maka saịtị ahụ. Nhazi njirimara na saịtị bụ usoro nke ịhụ na saịtị ahụ na-ahụ nke ọma site na ndị ọbịa ahụ na search engine s. Iji mezuo nke a, onye nwe ya aghaghị ime ihe ndị a: gụnye mkpuru okwu, mkpirịta ụka, na mkpado dị mkpa na ibe niile dị na saịtị ahụ. Ihe niile e kwuru na-enyere Google na ndị ọzọ search engine sokwa saịtị ahụ. Google chọrọ ịma isiokwu nke saịtị tupu ya akọwapụta ya na SERP.
Nwepu njikarịcha na saịtị
Usoro a na-enyere aka n'usoro ebe nrụọrụ weebụ dị elu site na ịdabere na ụzọ ndị ọzọ. E jiri ya tụnyere njikarịcha na saịtị, ọ bụghị usoro n'okpuru nduzi nke onye nwe ụlọ ahụ..Google na-ama ọkwa saịtị ahụ site na isi ndị a site n'icheba ikike nke isi iyi ahụ. Ọ bụrụ na saịtị nwere ikike dị elu na nchịkọta Google, mgbe ahụ algọridim ha tụlere ọdịnaya ọ na-ejikọta na saịtị dị ugbu a dịka ikike dị elu ma bulie ya n'etiti. Nzuzo di elu na blọọgụ kachasị mma kwesịrị ịbụ ihe mgbaru ọsọ maka ndị ahịa na-achọ ka eto eto.
E nwere ụzọ dị iche iche nke saịtị nwere ike isi dọta okporo ụzọ. Ụdị ejiji blank gụnyere ọtụtụ ụzọ dị iche iche, mana ụzọ iwu kwadoro okporo ụzọ na saịtị iji bulie elu na engines ọchụchọ. Ihe ka ukwuu n'ime ahia ndị e nwetara site na iji usoro a sitere na ndị ọrụ mmadụ. Ụzọ ole na ole n'ime usoro ndị na-adaba na ụdị a bụ azụ njikọ, ntinye isiokwu, na njikọ ụlọ . Ha niile na - enyere aka mee ka saịtị ahụ mara mma site n'ịkwalite ọdịnaya dị elu.
N'adịghị ka SEO na-acha ọcha, black-hat na-eji ụzọ iwu na-akwadoghị nweta okporo ụzọ iji bulie elu na engines ọchụchọ. N'ezie, ọ bụ mmebi kpamkpam nke usoro iwu Google ma bụrụ ndị nwere ntaramahụhụ. Ụfọdụ n'ime ụzọ ndị a na-agụnye nchịkọta nri, ibe ụzọ ụzọ, swapping sistemụ, backlinks n'iji akwụkwọ adịgboroja, wdg. Ndị ahịa anaghị agwa ha ka ha jiri ụdị SEO a mee ihe ọ bụla mere ha ga - eji zụlite azụmahịa ha.
Olee otú usoro a si emetụta azụmahịa?
Nhazi njirimara na saịtị na njikwa na saịtị ga-adị na weebụsaịtị. Emeghị nke a bụ ihe na-egosi na onye achọghị ka Google mara saịtị ahụ nke na - emetụta okporo ụzọ.
SEO na-acha ọsọ ọsọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa, mana naanị maka oge dị mkpirikpi. O doro anya na Google ga-ekpebi saịtị ahụ.
SEO na-ewepu ogologo iji nweta nchọta a choro, mana ha na-adịgide adịgide. Google na-ahapụ saịtị naanị ya ka ọ na-agbaso iwu na usoro iwu.
Ụdị okpu ojii dị ọnụ ala ma ọ bụghị uru ya na njedebe. N'aka nke ọzọ, ụzọ eji chaa chaa dị oke ọnụ ma nye ego bara uru.
Visibility na-ekpebi ịntanetị nke saịtị. Nchịkọta na ogo kpebiri nke a. Ụdị nke onye na-eji SEO na-emetụta ọdịmma ha.